PressReader - Ilanga: 2017-10-12 - Phansi amaphaphu ngeMabhida
Phansi amaphaphu ngeMabhida
Inkundla iyalungiswa futhi umdlalo weMTN8 Final uzoqhubeka
Ilanga - 2017-10-12 - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE
PHANSI amaphaphu kubathandi bakanobhutshuzwayo KwaZulu-Natal namaphethelo ngomdlalo wamanqamu weMTN8 phakathi kweSuperSport United neCape Town City ozokuba ngoMgqibelo ngo19h00 eMoses Mabhida Stadium, eThe-kwini.
Isiphepho esigadle mawala eThekwini namaphethelo ngoLwesibili, siqubule ukungabaza ngokuqhubeka kwalo mdlalo njengoba zibe ziningi izindawo ezikhahlamezekile.
IMabhida kayisindanga kulezi zindawo njengoba kucekeleke phansi ingxenye enezitolo kwathi inkundla yaphenduka idamu lamanzi.
UMato Madlala oyiSikhulu esiphezulu esibambile kwiPremier Soccer League (PSL) noVusi Mazibuko oyiMenenja yeMabhida bathi phansi amaphaphu, umdlalo uzoqhubeka kule nkundla.
UMazibuko uthi kuzoshaya usuku lo mdlalo inkundla isisesimweni esisezingeni elidingekayo.
“Amanzi siqale ukuwamunca enkundleni ngoLwesibili ebusuku nanamuhla (izolo ngoLwesithathu). Isimo sesingcono kakhulu. Angingabazi ukuthi kuzoshaya isikhathi somdlalo isisesimweni esihle kakhulu. Khona kusabonakala ukuthi ike yathikamezeka kodwa akukubi. Umdlalo uzoqhubeka. Abantu abaqhubeke nokuthenga amathikithi okubuka umdlalo. IPSL izosivakashela kusasa (namuhla ngoLwesine) ukuzozikholisa ngesimo senkundla. Angingabazi ukuthi nayo izovumelana nathi ngokuthi umdlalo uzoqhubeka ngaphandle kwezihibe,” kusho uMazibuko.
UMato ukuqinisekisile ukuthi umdlalo uzoqhubeka eMabhida.
“Abantu akumele babe nokudideka ngoba umdlalo uzoqhubeka nokugijinyelwa eMabhida. Sesixhumanile nabanikazi ben- kundla basho ukuthi isesimweni esihle. Abantu kumele bazi ukuthi kayikho enye inkundla ezosetshenziselwa lo mdlalo ngaphandle kweMabhida,” kusho uMato.
UMazibuko akakwazanga ukuqinisekisa inani lama thikithi asethengiwe ngenxa yokuba matasa nokubheka isimo senkundla. Nokho ukhuthaze abalandeli ukuwathenga ezikhungweni atholaka- la kuzona. Abiza u-R40 awadabala bese kuthi awezingane ezineminyaka engaphansi kweli-12 abize u-R15, kanti atholakala ezitolo ezidlelana neTicketPro okuyiEdgars, CNA noJet.
Khonamanjalo, uJabu “Pule” Mahlangu wodumo kwiKaizer Chiefs unxusa abalandeli ukuphuma ngezinkani kulo mdlalo. UMahlangu uyingxenye yezingwa- zi ezingamanxusa alo mqhudelwano.
Utheleke emahhovisi eLANGA izolo ngoLwesithathu emini ehambisana noJoseph “Dukuduku” Makhaya wodumo kwi-Orlando Pirates. Abalandeli bayanxuswa ukufika kusenesikhathi enkundleni njengoba abakwaMTN behlele idili lo mculo wamahora amabili ngaphambi kokuqala ko mdlalo.
NGUJOSEPH "Duku Duku" Makhanya noJabu "Shuffle" Mahlangu abangamanxusa eMTN8 Cup bevakashele emahhovisi eLANGA izolo ngoLwesithathu njengoba kuzokuba nomdlalo wamanqamu walo mqhudelwano ngoMgqibelo kusihlwa eMoses Mabhida Stadium.